Iinkonzo zokuRhweba ngokuThengiswa kwePropathi yeNdawo kwiRealWW
EyoMsintsi 08, 2016 by I-Lesja Poberezhets, Iimbono zizonke:
Wamkelekile kwi-RealtyWW! Apha uhlala, ubhala kwaye uthatha i-odolo lomshicileli Lesja Poberezhets. Ukuba usebenzisa iinkonzo zam zokushicilela izindlu nomhlaba, uya kufumana ukupapashwa okuqinisekileyo kwi-RealtyWW. Ingqondo yokudala, ukulesa, ukuthanda ishishini lakho kundivumela ukuba ndibhale izinto ezintle, ezikumgangatho ophezulu, ofanelekileyo, wentengiso, phantse kuwo nawuphi na umxholo, kubandakanya neNdawo ethengisa izindlu, ukuPhuculwa kwekhaya, ukwakha, imali, iYadi kunye negadi, njl.njl.
Ukuthengiswa kwearhente yokushicilela iarhente kwiarhente yesakhiwo
Ungafumana kum ugcino-mbhalo, nobuchule bokushicilela iipropathi, ndikulungele ukubhala indawo yakho okanye inkampani / aganacy ezona zicatshulwa zibalaseleyo. Ndimncinci kwaye ndizele intatheli yamandla. Kwiminyaka yam yokuqala ndisenepapasho kwi-RealtyWW. Kwaye ukuba ufuna into ekhethekileyo, entsha kwaye igcwele izinto ezinqabileyo, qiniseka ukuba ndingumbhali wenqaku okudingayo! Izicatshulwa ezinelungelo lokushicilela-umxholo wam. Ukuba ufuna iinkonzo zomnikezeli weenkonzo onamandla wokushicilela iipropathi, siza kusebenza kunye!
Indlela yokuyalela inkonzo yokubhala umxholo?
Ilula kakhulu. Uku-odola iinkonzo zokushicilela izindlu, okanye ezinye iinkonzo ezidwelisiweyo kufuneka uqhagamshelane nam nge-imeyile [Imeyile ikhuselwe] okanye ngokusebenzisa eli phepha ku Facebook
Isicatshulwa sahlukile kwisitayile esingenamsebenzi
Inqaku, elaliya kubhalwa ngokwamagama aphambili / izihloko kwaye labiwe kwimidiya yoluntu
Ukupapashwa kwengxelo malunga nenkampani / iarhente / iwebhusayithi
Ukuzalisa indawo yomxholo
Isicatshulwa esomeleleyo sokuprinta kunye nentengiso
Guqula ngokufanelekileyo izimvo zakho kwisicatshulwa
Bhala izicatshulwa ezithengiswa kakhulu
Inkolelo yokuba izicatshulwa zokubhala ziya kwenziwa ngexesha
Uqinisekisiwe ukuba ufumana isicatshulwa ngqo kumgca wexesha
Ushicilelo oluqinisekisiweyo kwi-RealtyWW
Naziphi na iinkonzo zokushicilela i-SEO. Nasiphi na isicatshulwa. Naziphi na izimvo. Yenza!
Ixabiso lam eliqhelekileyo yi- $ 10 yeesimboli ezili-1,000 200 (malunga namagama angama-XNUMX), ke ngoku ungayazi eliphi ixabiso onokulilindela xa unikezela ngeenkonzo zokushicilela izindlu.
Kodwa yonke into iya kuxhomekeka kubuntshatsheli bomsebenzi kunye nobude obugcwele isicatshulwa, ke nxibelelana nam kwaye ndiza kuqinisekisa ukunikezela ngexabiso elifanelekileyo.
Ngoba Iinkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba uyalelwe apha?
Intatheli yobuchule kunye nomshicileli wearhente yokuthengisa izindlu kwi RealtyWW
Unokufuna ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nengcali yokushicilela iipropathi kunye nomntu ofuna ukuhambisa iprojekthi yakho. Kwaye, mhlawumbi, ulinde iimpikiswano ezongeziweyo, ekukuqinisekisa ukuba uyisebenzise kum. Ndizifumana ngokwaneleyo
Ngoku ndiza kunika ngqo i-6 yezibonelelo zayo:
Ndimncinci kwaye ndigcwele nezimvo ezintsha, eziya kwenza inqaku lakho libe lelona lihle kakhulu kwaye akukho mntu unokungahoyi.
Ndiyaqonda ukuba baninzi ababhali abakhutshelweyo nabangamava, kodwa bonke mhlawumbi sele bephelelwe lixesha, ngaphandle kokuzinikela ngenzondelelo emsebenzini wabo kwaye benza yonke into ngokwephethini yakudala, ngaphandle kobuchule. Kodwa ngaba uyayidinga into efanayo, njengamakhulu abanye abanayo?
Inkqubo yobungcali. Ndaba ngumbhali osuswayo wokuthengisa izindlu kunye nomhlaba ngenxa yokuba ndinqwenela ukwenza imali kwi-blouse entsha okanye ndagqiba ekubeni ndizenzele into ethile okungenani. Ngalo msebenzi ndibuyile ndizimisele ukuwukhetha ngoku useyunivesithi.
Imfundo yobuntatheli. Ngubani omnye umntu onokuyibhala ngokuchanekileyo inqaku, ngobuchule, kwaye ngokubaluleke nangcamlo, ukuba akukhona intatheli?
Ububanzi obuphezulu kunye nokuphakama okuphezulu. Ndibhala ngaso nasiphi na isihloko. Ngokungafaniyo nabashicileli abaninzi andikhangeli kwisicatshulwa kuphela malunga nobuhle babantwana kunye nokulungiswa kwamagumbi. Ungandithemba ngokuqiniseka ukuba ndiza kubhala inqaku malunga nento oyifunayo.
Ulwazi lokufunda nokubhala olufanelekileyo. Vuma, ayimnandi kakhulu into yokufunda isicatshulwa kunye neempazamo. Kodwa, ngelishwa, iisayithi ezininzi zeenkampani zinesono kakhulu kwezi. Awufuni ukuba phakathi kwabo?
Khumbula, wonke umntu kobu bomi wenza into awayefanele ukuyenza. Ukubhala izicatshulwa Ndithembe iingcali. Sukuzama ukwenza oku ngokwakho ukuba awuqinisekanga ngolwazi lokufunda nokubhala. Kukho uninzi lweababhali abanobuchule, abanobuchule kwi-Intanethi, endibathandayo nabahlonelayo. Kodwa ukulamla, itekisi ecetywayo yengoma kwaye abayazi imigaqo esisiseko, ngakumbi. Ngethamsanqa, unethamsanqa, kuba udibana nam, ke-akukho zimpazamo kwisicatshulwa sakho.
Amaxabiso afikelelekayo kwizicatshulwa nakwiiwebhusayithi. Ewe unomdla kuwe, zingaphi na iinkonzo zomshicileli. Umsebenzi olungileyo, kunye neesoseji ezimnandi, izihlangu ezisemgangathweni okanye imoto entle, ayinakubiza. Kodwa imida ephezulu yegama "igama", "uphawu" kunye "ngenxa yokuba zininzi ezinye" ayikho kwimithetho yam. Ngenxa yazo zonke iinyani, ndicinga ukuba $ 10 ngeesimboli ezili-1,000 200 (malunga namagama angama-XNUMX) iya kuba ichanekile. Kodwa nangayiphi na imeko, unganikezela ngebhaso lakho.
I-PS Kubalulekile ukukhumbula ukuba kwakamsinya nje ubeka iwebhusayithi yakho ekumgangatho ophezulu, ngakumbi inzuzo iya kukuzisela, abathengi abancinci baya kuya kubakhuphiswano bakho. Ndiyathemba intsebenziswano eyinzuzo kunye.
Njengoko izicatshulwa ezikumgangatho ophezulu ngakumbi malunga nenkampani yakho ziya kuvela kwezinye iiwebhusayithi (njengezona realWW) njengegunya elingaphezulu kwi-Intanethi oya kuyifumana kwaye eyaziwayo iya kuba luphawu lwakho.
Ngokunyaniseka, umlobi wesicatshulwa u-Lesja Poberezhets
Ukuthengiswa kwezindlu, ukuphuculwa kwekhaya, ukwakha, imali, iYadi kunye neGadi, Luhlaza
Ukuba ufuna iinkonzo zomnikezeli weenkonzo onamandla wokushicilela iipropathi, siza kusebenza kunye! Uku-odola iinkonzo zokushicilela izindlu nomhlaba
3.4 (68%) 5 iivoti
I-Lesja Poberezhets Septemba 8, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Umthengisi wentengiso, Ukubhalwa kokubhala, Umbhali wenqaku, Inkonzo yokubhala amanqaku, Inkonzo yokuBhala kwiBlog, Ukubhalwa kokubhala phantsi, Umbhali wesiqulatho, Ukubhala Umxholo, Ukubhalwa kwesiqulatho seewebhusayithi zentengiso, Ukubhala umxholo kwiarhente yokuthengisa izindlu, Khuphela Bhala, Khuphela Ukubhala, Umshicileli, I-Freelance ye-Copywriter, Ikopi yokuthengisa izindlu, Ikopi yokuthengisa izindlu, Iinkonzo zokushicilela, Amaxabiso eeNkonzo zokuKopa, Amaxabiso eeNkonzo zokuKopa, Umshicileli wezezimali, Umshicileli wezezimali, Ukubhalwa kweencwadi zemali, Umshicileli osebenza ngokukhululekileyo, Umbhali we Freelance, UkuBhala ngokuBoniswa, Ukushicilela okuGqibeleleyo, Ukukhutshelwa komthetho, Ukushicilela kwi-Intanethi, Ukubhalwa kweNgcali, Ukubhalwa kwepropathi, Ukubhalwa kweNqaku learhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, Umxholo webhlog yeNdawo, UMboneleli weBhloko yokuThengiswa kweZindlu kunye nomhlaba, Umbhali wesiqulatho searhente, Ukubhalelwa imixholo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Umshicileli wezindlu, Ukukhutshelwa kwencwadi yokuthengisa izindlu nomhlaba, Iinkonzo Zokushicilela iiRhwebo ngeeNdawo, Ukubhala imixholo ye-SEO, Ukushicilelwa kwe-SEO, Iinkonzo zokuShicilela kwi-SEO, Ukubhala kwe-SEO, Umbhali weWebhu, Iinkonzo zokuShicilela kwiWebhu, Ukubhala imixholo yeWebhusayithi, Iinkonzo zokuShicilela kwiWebhusayithi, IiNkonzo zokuBhala. Bookmark le Permalink.
Septemba 12, 2018 Iindlela eziqinisekisiweyo zokubhalwa kweeNdawo zeePropathi zeeNdawo Ukubhloga ngoku kuba yeyona nto ibalulekileyo yokwenza ishishini lakho kwintengiso yedijithali. Apho bonke abanini-shishini be-intanethi bazama imizamo yabo kweli candelo ke kutheni oosomashishini bezezindlu bahlala nesandla esingenanto ngaphandle kokuthatha olu khetho lwentengiso olunomdla wokuphucula ishishini labo kwiwebhu? Ewe, zininzi iindlela onokuzama ngazo ukuseka ishishini lakho lokuthengisa izindlu kwi-intanethi phakathi kwabaphulaphuli bakho. Ukubhala iiblogi kwenye indlu nomhlaba […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Julayi 1, 2016 Intengiso yeBhanile yeNtengiso yePropathi yeeNtengiso amaxabiso amaxabiso aPhezulu- kwiRealWW Ngaphandle kwenyani yokuba i-realtyWW yinethiwekhi yentengiso yasimahla, sikwanikezela ngeenkonzo ezithile ezihlawulelwayo njengokubhengezwa kwesibhengezo kwixabiso eliphantsi kwiwebhusayithi yethu. Ke ukuba ufuna indawo yokwazisa ngebhanile yearhente yokuthenga kwixabiso eliphantsi- olona khetho lubhetele kuwe kufuneka lube yiwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba njenge-realtyWW. Kule meko intengiso yakho iya kuba yeyona ifanelekileyo kumxholo wewebhusayithi kwaye unokulindela ukufikelela kwi-CTR ephezulu kakhulu. Kananjalo singazamkela iibhanile ezingezizo izindlu nomhlaba […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Oktobha 12, 2017 Unokuzizinzisa njani njengoMthengisi wePropathi: Siphila kwihlabathi elinabantu abaninzi, sabelana ngeengcinga ezifanayo nezethu, ukuba ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba abantu bakhuphisana nabathengi kunye nabaxumi. Oku kunjalo nakubantu abakumhlaba wepropathi. Zininzi kakhulu iiarhente zabucala ezininzi kunye neenkampani ezinkulu ezinikezelwe kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, kangangokuba abantu abakwisikhundla apho banexesha elinzima lokuzenzela bona kunye nokufumana iinkonzo zabo zaziwa kubaxumi abanokubakho. Apha […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Septemba 19, 2016 Intengiso eendaba eSebenzayo eyahlukeneyo kwiNtengiso yeArhente yeNdawo? Intengiso idlala indima enkulu kwimpumelelo yeshishini ngalinye. Ngokubanzi, intengiso inceda uphawu, ishishini kunye neearhente zeshishini ukufikelela kubantu abaninzi kwaye babazise ukuba wenza ishishini okanye ubakhokele ukuba baqonde into oyenzayo. Abathengisi bepropathi abanakukujongela phantsi ukubaluleka kwentengiso yeendaba ezahlukeneyo ukuba banqwenela ukuba yimpumelelo kushishino lokuthengiswa kwezindlu. Iindlela ezahlukeneyo zentengiso kunye neendlela zokuthengisa zinokuvelisa okwenyani […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Februwari 21, 2019 Ungayifumana njani iAgent yeArhente yeTrasti? Iingcebiso ekufuneka uzilandele Ewe, iiarhente zeearhente zezindlu ngabantu abajongana nokuthenga kunye nokuthengisa iipropathi ezahlukeneyo. Kukho amawaka eearhente zezindlu nomhlaba ezithengiswayo, kwaye zonke zinobuchule kunye nobuchule bazo. Ezinye iiarhente zezindlu zinamava ngakumbi kwaye zidume kunabanye. Ayisiyiyo le kuphela, iiarhente zeearhente zeearhente zezindlu kunye nabo banamava kakhulu kwaye bahlawuliswa kakhulu ngabantu ngokunikezela ngeenkonzo. Kodwa into ephambili kukuba ukufumana iinkonzo […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Februwari 7, 2019 Uwufumana njani umhlaba kwi-Nevada Nangona i-Auctions zikaRhulumente Umhlaba ngotyalo-mali olufanelekileyo kwaye uyithengile ifikeleleka ngakumbi kunanini na ngaphambili. Nokuba yeyiphi na kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho, unokufumana umhlaba kwintengiso karhulumente. Umbuso udla ngokubonelela ngomhlaba othengiswayo ngamaxabiso afikelelekayo. Ngokufumana umhlaba ngakumbi ngexabiso, ukuqonda indlela yokutyala imali kuyo kwintengiso korhulumente kunconyelwa kakhulu. Ngethamsanqa, ngoku kuyenzeka ukuba ujonge indawo ethembekileyo yomhlaba karhulumente othengiswayo ezilalini nakwiilali zaseNevada […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi